Tarika Goatemalteka Mampiasa ny Tantara An-tsehatra Ho Fiatrehana Ny Herisetra Mihatra Amin’ny Vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Marsa 2015 8:27 GMT
Amin'ireo fampisehoana izay sady manasitrana no mampahery, mandefa hafatra mahery vaika ho an'ny fitoavian'ny lahy sy ny vavy sy manohitra ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy avy amin'ny seho ny vondrona teatraly Goatemalteka Las Poderosas (Vehivavy Mahery). Hatramin'ny 2008, nanenika ny media sosialy sy ny faritra ny asan'izy ireo. Hoan'ireo vehivavy ireo, ny teatra dia natao hanasitranana, hanameloka, hifandraisana sy hanentanana ao amin'ny firenena iray, izay araka ny vaovao avy amin'ny Vehivavin'ny Firenena Mikambana, “vehivavy roa isan'andro eo ho eo no maty misy mamono”.
Mitanisa ny tantaran'ny Las Poderosas ny bilaogy Heroínas (Vehivavy Mahery fo):
Mandray anjara amin'ny asam-piarahamonina miaraka amin'ny vehivavy avy amin'ny faritra isan-karazany, na ao anatiny na ivelan'i Goatemala ny Las Poderosas. Mandrisika ny vehivavy izy ireo hizara ny traikefany ho fisarihana ny saina manoloana ny olan'ny herisetra ary hanome vahaolana amin'izany. Ohatra iray amin'ny ezak'izy ireo ny fandraisana anjara amin'ny Andro Iraisam-pirenena ho Fanafoanana ny Herisetra Mihatra amin'ny ny Vehivavy miaraka amin'ny “vehivavy teo amin'ny 60 teo avy amin'ny kaominina 8 ao anatin'ny Departemantan'i Sololá ao Goatemala; mpitarika sy nierem-pahafatesana tamin'ny herisetra ny sasany tamin'izy ireo”.
Miompana amin'ireo karazan'endriky ny herisetra ny fampisehoana vao haingana indrindra “Naciendo” (misandratra) nataon'izy ireo, anisan'izany ny fisiany ao amin'ny lova samihafa ao Goatemala sy ny ady an-trano mamirifiry ao amin'ny firenena izay nahafatesana olona maherin'ny 250.000. Lalindalina kokoa noho izany, manomboka miresaka ny vatana, ny firaisana ara-nofo ary ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fikaroham-panahy ity karazam-pamokarana vaovao ity: